अब शक्ति प्रक्षेपण हुनैपर्छ !| The Margin Media
कार्टुनः भरत राई
जब भुइँस्तरबाट समुदाय, स्थानीय निकाय तथा प्रदेश हुँदै राजनीतिको केन्द्रतिर हामी शक्ति प्रक्षेपण गर्ने सामर्थ्य राख्छौँ तब मात्रै आम दिनहीनका महत्वका मुद्धाहरूलाई सम्बाेधन गर्न सक्छौँ । शक्तिको यो बहुआयमिक प्रवृत्तिलाई अब आउने हरेक सत्तासिनहरूले बुझ्नैपर्छ । नत्र हरेकको हालत ओलीको जस्तै हुनेछ ।
अन्ततः शेर बहादुर देउवाले संसदबाट भारी विश्वासको मत प्राप्त गर्दै आफ्नो पाचौँ प्रधानमन्त्री कार्यकाललाई सुनिश्चित गरेका छन् । दुई तिहाइ बहुमत बोकेर करिब साडे तीन वर्ष सत्ता चलाएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बढो नाटकीय ढंगबाट सत्ताबाट बाहिरिएका छन् ।
यो परिघटनालाई अधिकांशले संविधान र लोकतन्त्रको जित तथा फासीवादी अहंकारको पराजयका रूपमा लिएका छन् । जनमत गुमाइसकेका राजनीतिक दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्नु लोकतान्त्रिक नलाग्न पनि सक्छ । तर, जनमतको आडमा ओलीले अभ्यास गरेको निरकुंशता, स्वेच्छाचारिता, कुशासन, नीतिगत भ्रष्टाचार र फासिजमलाई जसरी पनि बिदा गर्नु परेको अवस्था थियो । यो फासिज्मको अभ्यासलाई मुलुक र नागरिकले अरू थप कार्यकाल धान्न सक्ने अवस्था नै थिएन ।
त्यसमाथि जब संसदबाट एक्लिने अवस्था सिर्जना भयो ओलीले पटकपटक संविधान र जनमतमाथि कुठाराघात गर्दै जनमतको अभ्यास गर्ने थलो संसदकै हत्या गर्ने दुस्प्रयास गरेका थिए । त्यसैले अन्ततः संसद र न्यायलयकै अथक प्रयासबाट उनलाई सत्ताबाट बहिर्गमनको बाटो देखाइयो । यस अर्थमा जनमत प्राप्त सांसदहरूको स्वविवेकले गरेको यो फैसलालाई लोकतान्त्रिक मान्नैपर्छ ।
त्यसो त ओलीले अभ्यास गरेको फासिज्मको परिदृश्य सत्ताबाट बाहिरिसकेपछि पनि बालुवाटारबाट बालकोटसम्मको उनको बहिर्गमन यात्रामा समेत बडो निर्लज्जसँग देख्न पाइयो । हामी कुनै व्यक्तिकाे स्वेच्छाचारिताबाट होइन, विधि, पद्धति र राजनीतिक संयन्त्रबाट शासित हुन चाहन्थ्यौँ । त्यसैले नै हामीले अथक प्रयासका बावजुद यो मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भित्र्याएका थियौँ ।
तर, ओलीद्वारा मुलुकको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै भद्धा मजाक गर्दै, राज्यका स्वायत्त संथाहरूलाई क्षय–क्षय पार्दै मुलुकको संविधानमाथि नै पटकपटक कुठाराघात गर्ने काम भयो । दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गरेर पनि जनमतको दुरुपयोग गर्दै साढे तीन वर्षसम्म ओलीले चलाएको कुशासन र त्यसबाट अहिलेसम्म सिर्जना भएका राजनीतिक उतारचडावले अहिलेको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । त्यसैले पनि न्यायलय र संसदको सुझबुझपूर्ण कदमबाट उनलाई हुत्याउनुको अर्को विकल्प पनि थिएन ।
तत्कालका लागि यही व्यवस्था अन्तर्गत शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेर आएका छन् । यिनीसँग खासै कसैले केही ठूलो अपेक्षा गरेको छैन र गर्दैन पनि । केही अपेक्षा छ भने त्यो हो – राम्रो नगरेपनि कम्तीमा नराम्रो नगरिदिउन् ।
त्यसो त इतिहासदेखिका चुनौतीका पहाडहरू ज्यूँकात्यूँ खडा छन् । यहाँ सत्ता माफियागिरीमा चल्ने गर्छ । राज्यका स्वयात्त संथा तथा अंगहरूमा सत्ताको नाङ्गो हस्तक्षेप जस्ताको त्यस्तै छ । जुन ओली सरकारको पालामा झनै आकासिएको थियो । स्वास्थ्य र शिक्षाको बजारीकरणले जनताको खुन र पसिना चुसेको चुस्यै छ अनि नेता, विचौलिया र माफियाहरूलाई पोसेको पोस्यै छ । आम भुइँ मान्छेको जीवन दिनानुदिन दयनीय नै बनिरहेको छ । समाजका बहुआयामिक विभेदका खाडलहरू झन्झन् फराकिला बन्दै गइरहेका छन् ।
अनि पछिल्लो परिवेशको सबैभन्दा डरलाग्दो कुरो – राज्यका माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मका सबै सत्ताधारीहरू अकुत मुनाफाको लागि प्राकृतिक स्राेतको अधिकतम् दोहन गर्न तछाडमछाड गरेर लागिपरेका छन् । जसको भावी तथा दीर्घकालीन असर अकल्पनीय हुनेछ ।
यो राजनीतिक सस्कार साँच्चिकै संग्लिएको थियो भने चारचार पटक परिक्षित देउवा यो विषम घडीमा फेरि दोहोरिएर आउने थिएनन् । जुनसुकै दलको किन नहोस् सुझ–बुझ बोकेको कुनै जुझारु नयाँ व्यक्तिले नेतृत्वको अवसर पाउने थियो । त्यस्ता व्यक्तिहरू भएपनि अझै ति आफैँ राजनीतिको सिमान्ततिर धकेलिइरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा हामीले सिमान्तकृत समुदायको उत्थान र आम मानिसको हित हुने काम सत्ताले गर्नेछ भनेर विश्वास गर्न सकिन्न ।
अब, प्रश्न उठ्छ । के देउवाले यी संगीन विषयहरूको थोरै भएपनि सम्बाेधन गर्न सक्लान् ? उनले सम्बाेधन गर्न चाहलान् ? कथंकदाचित चाहेपनि वर्तमान राजनीतिक संरचनामा यी समस्या हल गर्न सम्भव होला ?
यही थिति र संरचनामा दिनहीन र आम नागरिकका तमाम समस्याहरूको समाधान गर्न सम्भवतः असम्भव होला । यो राजनीतिक सस्कार साँच्चिकै संग्लिएको थियो भने चारचार पटक परिक्षित देउवा यो विषम घडीमा फेरी दोहोरिएर आउने थिएनन् । जुनसुकै दलको किन नहोस् सुझ–बुझ बोकेको कुनै जुझारु नयाँ व्यक्तिले नेतत्वको अवसर पाउने थियो । त्यस्ता व्यक्तिहरू भएपनि अझै ती आफैँ राजनीतिको सिमान्ततिर धकेलिइरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा हामीले सिमान्तकृत समुदायको उत्थान र आम मानिसको हित हुने काम सत्ताले गर्नेछ भनेर विश्वास गर्न सकिन्न ।
आजसम्म पनि चाहे पश्चिमा मुलुकमा होस् या पूर्वमा चाहे त्यो समाजवाद, पुँजीवाद, फाँसीवाद वा साम्यवाद जुनसुकै व्यवस्थामा पनि शक्ति माथिबाट एकोहोरो तलतिर लाद्ने मात्रै काम भयो । त्यसैले नै संसारको हरेक कुनाका उत्पीडित र दिन–हिनको भोगाइ आजपनि उस्तै छ । भला मात्रामा फरक पर्ला । नीति निर्माण तथा शासस संयन्त्रमा, तल्लो तह र तप्काको पनि भूमिका होस् भनेर नै हामीले तीन तहको शासन व्यवस्थासहितको संघीयता आत्मसाथ गरेका हौं ।
तर अभ्यासको शुरूवातमै सत्ता संघीयता विरोधी तत्वको हातमा पुग्यो र उक्त तत्वले यो व्यवस्थालाई असफल पार्न आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरिरह्यो । निरकुंशता तथा स्वेच्छाचारिता सहित शक्ति माथिबाट तल ‘भर्टिकल’ स्वरूपमा लाद्ने काम यसकै लागि भएको थियो । यही प्रवृति नै अन्ततः ओलीको सत्ता बहिर्गमनको प्रमुक कारण बन्यो । त्यसो त अहिलेका प्रधानमन्त्री पनि उनले आफ्नो दलभित्र लाद्दै आएको यही भर्टिकल शक्तिको कारण नै प्रधानमन्त्रीको एकलौटी दावेदारका रूपमा उदाएका हुन् । र, यो भर्टिकल शक्ति लोकतन्त्र र आम नागरिकको लागि एकदमै घातक कुरो हो ।
हामीले खोजेको कुनै स्वैच्छाचारी, निरकुंश, फासिस्ट या तानशाहको शासन होइन । हामी त चाहन्छौँ शक्ति भुइँमा होस्, सामुदायिक तहसँग होस् । निर्णय निर्माणको तहमा, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र राजनीतिक रूपमा पनि स–सना इकाइ तथा समुदाय आत्मनिर्भर हुन् । केन्द्रको अनावश्यक हस्तक्षेप बन्द होस् ।
मिचेल फुको भन्छन् कि शक्ति माथिबाट तल (भर्टिकल स्वरूपमा) मात्रै लादिँदैन, बरू तलबाट माथि पनि शक्ति जाने गर्छ । जब भुइँस्तरबाट समुदाय, स्थानीय निकाय तथा प्रदेश हुँदै राजनीतिको केन्द्रतिर हामी शक्ति प्रक्षेपण गर्ने सामर्थ्य राख्छौँ तब मात्रै आम दिनहीनका महत्वका मुद्धाहरूलाई सम्बाेधन गर्न सक्छौँ । शक्तिको यो बहुआयमिक प्रवृत्तिलाई अब आउने हरेक सत्तासीनहरूले बुझ्नैपर्छ । नत्र हरेकको हालत ओलीको जस्तै हुनेछ ।